အဆိုပါ 10 Dumbest ရာဇဝတ်သားများ
လူတိုင်းဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့တော်တော်စကားမပြောနိုင်သောအပြောင်းအရွေ့ပေမယ့်အချို့ပြစ်မှုများအခြားသူများထက် dumber များမှာသိတယ်။ ဤအရာဇဝတ်ကောင်မိုရာဇဝတ်ကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်စာရင်းကိုအပေါ်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးဝင်ငွေပြုအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာပါ။ ဤအရာဇဝတ်ကောင်တွေအများကြီးအကြောင်းကိုဆိုပါတယ်နိုင်ရာတစ်ခုမှာသူတို့သေချာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးနှင့်အတူဖန်တီးမှုကိုဘယ်လိုသွားရမလဲသိသောပါ!
ပျားရည်, သူတို့ကခွေး Snorted!
ဒို Soroa ။ Mugshot
ဖလော်ရီဒါမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏အုပ်စုတစုစွပ်စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးခဲ့ကြသည်တစ်ဦးနေအိမ်သို့ချိုးဖဲ့နှင့်မီးသဂြိုလ်သားကောင်ရဲ့အဖေ၏အကြွင်းအကျန်များနှင့်နှစ်ဦးကိုခွေးအပါအဝင်မြောက်မြားစွာပစ္စည်းများကို ယူ. , သူတို့မှားယွင်းစွာယူဆထားတဲ့။
ရဲတပ်ဖွဲ့တရားစွဲဆိုအမျိုးမျိုးသောဖောက်ထွင်းအပေါ်ဒို Soroa (ပုံ), 19, ဟိုဆေး Diaz Marrero, 19, Matrix Andaluz, 18 နှစျယောကျ 17 နှစျအရှယျဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
အကျဉ်းထောင်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုတစ်နာကျင်မှု Be နိုင်သလား
Earl Lee က Vogt ။ Mugshot
တစ်ဦးအပေါ်လေးနှစ်နီးပါးမတ်လ 2011 ခုနှစ်, Earl Lee က Vogt ထောင်ဒဏ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ထောင်ဒဏ်တိုက်ရိုက်လှေတျတျောမူ မူးယစ်ဆေးဝါးခံယူချက် ။ သူဖွင့်သော့ခတ်ခဲ့သည်မကြာခင်မှာပဲပြီးနောက်, အမျိုးမျိုးသောမှောင်ခိုပစ္စည်းများ, မိမိဆဲလ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရေကန်ကောင်တီ, Ca. ပွုပွငျအရာရှိများတစ်ဦး Kyocera ဆဲလ်ဖုန်း, Mp3 player ကို, earbud နားကြပ်, ဆေးရွက်ကြီးဆေးခြောက်နှင့်ငွေသား $ 140 ကိုထုတ်လေ၏။ သူသည်မိမိအကဉျြးထောငျကလာပ်စည်းသို့အပေါငျးတို့သပစ္စည်းများရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲပုံကိုမေးတဲ့အခါ, Vogt သူအခြားပါ Mp3 player ကိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေဖြင့်အခြားအကျဉ်းသားထံမှဆေးခြောက်တယ်မိမိ rectum အတွက်အခြားပစ္စည်းများကိုဝှကျထားကြောင်းပြောဆိုထားသည်။
ဝိန်း Cokayne ။ Mugshot
ကီဗင် Lee က Cokayne ခဲ့သည် အဖမ်းခံရ သူတို့သူ၏နေအိမ်တွင်အတွင်းမှဆေးခြောက်တွေ့ရှိပြီးနောက်စွပ်စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများဆက်ဆံဘို့ Fairfax County, ဗာဂျီးနီးယားရဲတပ်ဖွဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရကင်းများအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ရဲအရာရှိ Cokayne ရဲ့နေထိုင်ရာမြို့သို့ သွား. မိမိနေအိမ်အားရှာဖွေနိုင်ဟုမေး၏။
သူ၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် 8-ဘောလုံးကို၏ရုပ်ပုံသူ Cokayne, တစ်ဦးအမှားတွေနှင့်ရဲများကအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစွန့်ပစ်ခဲ့သောသူသာပေါင်းပင်၏ရှစ်အောင်စခဲ့ကြောင်းရဲများကပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါကရှာဖွေရေးရမ်းရရှိရန်အရာရှိကသတိပေးခံရခြင်းနှင့်ရဲပြန်သောအခါသူတို့ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူ Cokayne ကိုအားသွင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ဆေးခြောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Fritts ။ Mugshot
သူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးထောင်ထဲရှိကြ၏နှင့်တစ်ဦးအကျဉ်းထောင်မှကလောင်-PAL က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်အစည်းအဝေးအပြီးတွင်အက္ခရာများဖလှယ်နေစဉ်ရွိုင်းနှင့်ဂျက်စီကာ Fritts '' မေတ္တာဇာတ်လမ်းစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်နောက်ဆုံးမှာတစ် jailhouse လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်။
သူတို့ထောင်ထဲမှထွက်ရတယ်အခါ, မတ်ေတာစုံတွဲသူတို့နီဗားဒါးသွားချင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမရှိနည်းလမ်းခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ပြီးတော့စွပ်စွဲသူ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်နှင့်သူ၏ဗန်ခိုးယူပြီးတော့, လမ်းဘက်မှာသူ့ကိုထွက်ခွာခြင်းဖြင့်သတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူတစ်ဦးလူထဲကတစ်ဦးစီးနင်း hitching တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
utah ရဲခိုးယူဗန်ပြောက်နှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှာစုံတွဲလိုက်ဖမ်းစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်ရပ်တန့်တုတ်ထားကြ၏ရဲတပ်ဖွဲ့ကျော်စီးနင်းပြီးနောက်ဗင်တာယာထွက်မှုတ်။
အရှုံးမပေးဖို့အဆင်သင့်မရ, ဤအကြောင်းနားလည်တဲ့ဟောင်း cons ခြေလျင်ချွတ် ယူ. , ကံသူတို့ခိုးယူဖို့အခြားကားတစ်စီးကိုတွေ့ပါကရှိသည်မယ်လို့အဖြစ်ထို့နောက်အထဲတွင်ခုန်တက်ခြင်းနှင့်ပူလိုက်စားအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူနောက်တဖန်ချွတ်ယူလာတယ်။ ကိုယ့်တဦးတည်းကိုအဓိကပြဿနာရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကား Fritts မတဦးတည်းမောင်းဖို့ဘယ်လိုသိတယ်တဲ့ချောင်းကိုပြောင်းကုန်ပြီရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဲအလျင်အမြန်ကြိတ်ကားတစ်စီးဝိုင်းရံများနှင့်နှစ်ဦးကိုနောက်ဆုံးမှာလက်နက်ချခဲ့သည်။
ဝီလီ Avery ။ Mugshot
သင့်ရဲ့မူးယစ်ကုန်သည်သင် stiffs အခါသင်အဘယ်သို့ပြုပါသနည်း Corpus Christi ၏ဝီလီ Avery ယူသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး action ကို 9-1-1 ဖုန်းခေါ်ခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ရသည်မှာ, Avery ကသူ့ကိုဆေးခြောက်နှင့် (ကြီးတွေအံ့အားသင့်စရာ) ၏အဖြစ်တော့မဝယ်သွားကြဖို့ယောက်ျားတစ်ယောက် 10 ဒေါ်လာကိုပေး၏လူကိုပြန်ရောက်တာပါ။ လုယက်, Avery တိုင်းမူးယစ်ဆေးဝယ်ပြုပါမည်ဟုအဘယျသို့ပွုခဲ့ Feeling, သူကအရေးပေါ်အကူအညီတောင်း 9-1-1 ကိုခေါ်။ ရဲရောက်တုန်းသူပထမဦးဆုံးသူကရိုက်နှက်လုယက်ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်အမှန်တရားကိုပြောသည်။
Arby ရဲ့အဘယ်သူမျှမ Mood အတွက်အနုပညာ Theft များအတွက်
Arby Artnabbers ။ Mugshots
အဆိုပါစကားပုံ, "ချရိုက်မဖြစ်လျှင်, တစ်စုံတစ်ဦးကခိုးယူလိမ့်မယ်" ဟုဂျွန်ဆင်စီးတီး, Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တစ်ခု Arby ရဲ့စားသောက်ဆိုင်ကနေအနုပညာခိုးယူ၏ဤအမှု၌စိတ်ကိုထံသို့မရောက်ရ။
ရဲ, Connie Sumlin, 45 နှင့် Erwin ကနေနှစ်ဦးစလုံး GAIL ဂျွန်ဆင်, 58, အဆိုအရ Tennessee ပြည်နယ်အဖမ်းခံခဲ့ပြီးစောင့်ကြည့်ကင်မရာကိုပိတ်ထားရိုက်ကူးပြီးနောက်ခိုးမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမိန်းမများတစ်သစ်တော်သီးနှင့်အ Arby ရဲ့ဧည့်ခန်းထဲကနေအကာအရံပန်းပုတစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြရုပ်ပုံလွှာကိုခိုးယူပြသသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ထို့နောက်အနုပညာအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ဖို့လော်ဘီထဲမှာရပ်တန့်သည့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး Arby ရဲ့ဝင်ရောက်ပြသထားတယ်။ အခြားမည်သည့်အဖွဲ့ကအနုပညာ-nappers ပြုအံ့အဖြစ်ထို့နောက်သူတို့တက်ကွဲ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကစားသောက်ဆိုင်အတွင်း၌ သွား. အခြားမိန်းမအနုပညာလက်ရာများအားဖယ်ရှားစဉ်အစားအသောက်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ကစောင့်ကြည့်ကင်မရာနှင့်မိန်းမတို့၏အထိခဲ့ကြသည်နှင့်ရဲကိုခေါ်အဘယ်အရာကိုမြင်သောသူစားသောက်ဆိုင်ရဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာမန်နေဂျာဘို့မဟုတ်ခဲ့လျှင်အစီအစဉ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပေမည်။ ရက်အနည်းငယ်နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများ, ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးတစ်ခုချင်းစီကို $ 500 ကျော်တစ်ဦးခိုးယူဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။
Anamicka Dave ။ Mugshot
Roswell, နယူးမက္ကစီကို၏ Anamicka Dave, 29, အချို့သောဆေးခြောက်ကိုဝယ်ချင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်သူမပုံဟာကုန်သည်မတှေ့နိုငျတယျ။ ထို့နောက်ပါရမီ၏လေဖြတ်လျှင်အဖြစ်သူမက Craigslist ပေါ်ရှိ "ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတှေ့ဆုံ" အပိုင်းတခုတခုအပေါ်မှာကြော်ငြာ post ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
စိတျအပိုငျးမှာဖတ်အဆိုပါကြော်ငြာ, "မြို့မှနယူး MaryJane ဝယ်ဖို့ရှာဖွေနေ။ "
Sharp က-eyed ရဲတပ်ဖွဲ့တပ်ကြပ်ကြီး။ ty ရှပ်ကြော်ငြာပြောက်နှင့်သူ၏ဦးစီးဌာနကဖွင့်ခံရမယ့်ပြောင်းပြန်-နစ်နာမှုစစ်ဆင်ရေးမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက်သူအရေးယူသို့သွားလေ၏။
အိုးကုန်သည်တွေအဖြစ်သရုပ်ဆောင်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်အေးဂျင့် Dave နှင့်တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ပေးသူကိုတက်ပြသသည့်အခါချက်ချင်းသူမကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ယေရှဲ Dimmick ။ Mugshot
2009 ခုနှစ်တွင်လူသတ်မှုသံသယခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရှောင်ရှားရန်အားထုတ်မှုအဖြစ်ယေရှဲ Dimmick ရဲတပ်ဖွဲ့နောက်ကွယ်မှအနီးကပ်အောက်ပါအတူပြေးသွားလေ၏။ သူနှစ်ဦးကိုခိုးယူကားများ crashing တက်အဆုံးသတ်ပြီးတော့ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံယာရက်နှင့် Lindsay Rowley ယူရန်ဆုံးဖြတ် ဓားစာခံ ။
သူတို့မဆိုဧည့်သည်လိုအဖြစ် Rowleys သူ့ကိုခေါင်းအုံးနှင့်အတူစေားနှင့်စောင်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, Dimmick ကုသနှင့်အုပ်စုတွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့နှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်။ ,
Dimmick အဆိုပါ Rowleys အိပ်ချွတ်ခေါင်းညိတ်တဲ့အခါမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နှင့်ရဲကိုခေါ်။ အဲဒီမှာ scuffle ခဲ့သူပစ်သတ်ခင်သူအဖမ်းခံရပေမယ့်မခံခဲ့ရပါဘူး။
အဆိုပါ Rowleys ထို့နောက်အိမ်တွင်ကျူးကျော်နေဖြင့်ပေါ်ယူဆောင်စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက် $ 75,000 နှင့်ကျင်းပလျက်ရှိ, ဓားစာခံများအတွက် Dimmick တရားစွဲဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဖြစ်ကောင်းသူတစ်ဦးအမှန်တကယ် "gotcha" ယခုအချိန်တွင်ရှိခြင်းခံခဲ့ရစဉ်းစားသူပြန်လာ Dimmick ၌စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် $ 235.000 များအတွက် Rowleys တရားစွဲဆိုသူကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ကူညီရန်တန်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သူက "ငါသည်, တရားခံငါသည်ငါ့အသက်အဘို့ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ငါ့ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ Rowleys မေးတယ်။ ငါထို့ကြောင့်တစ်ဦးတရားဝင်စည်းနှောင်ပါးစပ်စာချုပ်အတုလုပ်တဲ့သည် Rowleys သူတို့အပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့သည့်ပိုက်ဆံတစ်ခုသတ်မှတ်ငွေပမာဏကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ " ဟုရေးသားခဲ့သည်
အံ့သြစရာကောင်းတာကအဆိုပါ Rowleys အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုပယ်ချရနိုင်ရန်အတွက်တရားသူကြီးတစ်ဦးမှဖွင့်ခဲ့ကြရသည်။
အဆိုပါ meth မင်းလမ်းအတွက် Up ကိုရှင်းလင်း!
Alisha Halfmoon ။ Mugshot
ထို့အပြင် Alisha Halfmoon အဖြစ်လူသိများဧလိရှဗက် Alisha Greta Halfmoon, 45, အချို့ meth ထချက်ပြုတ်ဖို့ Tulsa Walmart သို့သွား၏စွပ်စွဲနေပါတယ်။
ခြောက်နာရီများအတွက် store မှာဘူးသော Halfmoon, သင်္ကာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tulsa ရဲတပ်ဖွဲ့အဆိုအရ, Walmart လုံခြုံရေးသူတို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
အရာရှိချုပ်သည်ဒါဝိဒ် Shelby သူစတိုးဆိုင်အတွင်းမှ Halfmoon ချဉ်းကပ်လာသောအခါသူမယ့်မြင့်မားပေါက်ကွဲအရောအနှောဖြစ်နိုင်သည့် starter အရည်နှင့်အတူဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ရောစပ်ပြီးဆုံးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
မီးသတ်သမားသူမကလုပ်နေတာခဲ့သည်ကားအဘယ်သို့သောသူတို့အားထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်းအခင်းဖြစ်ပွားရာအပေါ်ခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှာ "သူမထိုအဓာတုပစ္စည်းရရှိရန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့် meth ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်သူမသည်မှာအလွန်ကောင်းမဟုတ်ခဲ့ "ဟုအရာရှိ Shelby ကဆိုသည်။
တိမောသေ Clark က။ Mugshot
ရသည်မှာ, မေရီလန်းပြည်နယ်၏တိမောသေ Randall Clark ကမှပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ထင် Walmart အနေဖြင့်ခိုးယူ 50 ရဲအရာရှိအားဖြင့် store မှာကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ "ဆိုင်တစ်ဦးကရဲနှင့်အတူ" ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
Walmart လုံခြုံရေးကသူ့ရှပ်အင်္ကျီများတွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေ Clark ကဖမ်းမိခြင်းနှင့်ရဲကိုခေါ် - ထိုသူအပေါင်းတို့သည် 50 ။
ရဲတပ်ဖွဲ့ Clark ကဘူတာနဲ့ Xbox ဂိမ်းနှစ်ခုနဲ့ controller နှင့် $ 635,04 တန်ဖိုးသည်အခြားဗီဒီယိုဂိမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်း Play 26 $ 635,04 တန်ဖိုးရှိ၏ခိုးမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
Black က Holes တစ်ခုနိဒါန်း
ကင်လုပ်ခိုင်း Play လုပ်နည်း - တစ်ဦးက Crash Course
မာ့က်စ်အတွက်ထုတ်ကုန်များ Mode ကို
Venustiano Carranza ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အကွိမျမြားစှာ Intelligence ၏သီအိုရီတစ်ခုနိဒါန်း
Howard အက်စ် Becker က၏ဘဝနှင့်လုပ်ငန်း
စိန့် Brigid သူကားအဘယ်သူခဲ့သလား (စိန့် Bridget)
အဖြေများ PDF ကို၏ 2nd စာမျက်နှာပေါ်ဖြစ်ကြ၏ Variables ကိုအဘို့အဖြေရှင်းပေး
မည်သို့ 10 x 10 လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဒါဟာပုံအားကစားသမားများအတွက်ကောင်းမွန်သောလား?
အဆိုပါ 10 အများစုမှာအစွမ်းထက်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနှင့် World သမိုင်းအတွက်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း
ကို Mickey ရွန်နီအတ္ထုပ္ပတ္တိ
လှိုင်းတံပိုးတို့သည် Breaking လိုပဲကွညျ့လိုကျသောတိမ်ဘာတွေလဲ?